Wuxi Weiheng Chemical Co., Ltd. ndiye aitungamirira nokutengesa amines uye nomukaka. Kushanda makasitoma kubva maindasitiri akasiyana kwemakore anopfuura 15 apfuura, whamine ane yakakwana Portfolio pamusoro amines, amides, quats zvinoshandiswa achiyambuka misika yakaita maindasitiri kuchenesa, pachake hanya, disinfection, agrochemicals uye mishonga. Whamine richaramba ayo tichiedza kusimbisa ayo zvakanakira nokusika ukoshi vose vatengi ayo, uye anoedza kuva kuwedzera airemekedzwa uye anovimbwa zita.
Kutanga pokutungamirira surfactant chichakurukurwa chinoratidzwa zvinotevera: 1. zvinoitika kuva zvechisikigo; 2. ichatsiva makemikari anokuvadza, 3. kushambidzwa kuti kuisa ...
Mashandiro anoita Cationic Surfactant - Antistatic Effect
Soft uye chechetere Kana surfactant mamorekuru dzichienderana pamusoro pemvura jira, hama coefficient pakati kunofambira mberi kukweshera of Mucheka kunogona kuderedzwa. Non-Ionic surfactants akadai Linear alkyl Polyoxyethylene ethers, Linear alkyl mafuta iine acid Polyoxyethylene ethers, uye siyana cationic surfactants zvose kuderedza kunofambira mberi frict ...
Mashandiro anoita Cationic Surfactant - Solubilization
Solubilization Solubilization rinoreva kubata surfactant pamusoro kuwedzera solubility pakati havaratidzi soluble kana insoluble zvinhu mumvura. Somuenzaniso, mashoko solubility kuti benzene mumvura 0.09% (vhoriyamu hacho). Kana surfactant (akadai yavaibvisa adipate) iri akawedzera, kuti solubility kuti benzene anogona ngazviwedzerwe 10%. Solubilizat ...
Phenylethanolamine-N-Methyltransferase , Anti-kunofambira mberi Agents , Octylamine , Intermediates ,